Rakkoo magaalaa Dirree Dhawaatti kaleessa uumamen 10 lubbuu dhaban - BBC News Afaan Oromoo
Rakkoo magaalaa Dirree Dhawaatti kaleessa uumamen 10 lubbuu dhaban
Rakkoo guyyaa kaleessaa magaalaa Dirree Dhawaatti dhalaten lammiileen kudhan lubbuu isaanii dhaban.
''Namoonni 10 du'aniiru. Kan isaan du'an balaa ibiddaa waldhabdee hordofee dhalateeni,'' jechuun Hogganaan kominikeeshinii komishinii poolisii magaalatti, Saajiin Olaanaa Baantaalam Girmaa BBC'tti himaniiru.
Akka isaanitti, balaan ibiddaa elektirikiin wal qabatuu isaatu balaa kana hammeesse.
Kan ukkaamamani du'an jiraachuu kan mirkaneessan qondaaltichi hanga namoota miidhamani hin baramane jedhaniiru.
Madda waldhabdee kanaa poolisiin qorataa jiraachuu kan himan qondaalli kun waldhabdee sabaa miti jedhu.
''Waldhabdeen kuni kan sabaas ta'e amantii akka hin taane poolisiin mirkaneessuu barbaada,'' Saajiin olaanaa Fantaalam Girmaa.
Rakkoo guyyaa kaleessaa ganda 09 keessatti mudate tasgabbeessuuf yeroo poolisiin socho'e lubbuun namaa darbe akka hin jiraanne himaniiru.
Lubbuu namaan alatti manaafi qabeenyi namootaas gubachuu jiraattonni ni himu.
Jalqaba dargaggootni dhalattoota Oromoo ta'an biyyatti deebi'uu obbo Jawaar Mahaammad waan gammadanif sagantaa qopheessaa turan.
Boodas dhalattootni naannoo Somaalee dhiyeenya ganda Garaadaatti argaman dhalattoota Oromoo reebuu akka eegalan fi walitti bu'iinsi eegalamuusaa jiraataan magaalatti hima.
Halluuwwan Dirree Dhawaa
Jiraattuun kan biroo immoo "jarri Somaalee Oromootni yeroo sirban dhagahanii odeeffanoon dogongoraa nu reebuufi jedhu waan isaan qaqqabeef baay'atanii gara iddoo qophichaatti dhufanii lolli eegalame" jetti.
Jiraataan biraa maqaa dhokfatan immoo, halkan kaleessaa sagalee dhukaasaa dhagahaa akka bulan fi humnoonni nageenyaa haalicha tasgabbeessuuf yaalaa turuu isaani hima.
Ganama kanas iddoowwan magaalattii ganda Garaadaa, Addis Keellaa, Poolis Mareet fi Quxxabaa jedhamanitti dargaggootni gareedhaan ijaaramanii socho'aa akka turan fi poolisiinis isaan bittinsuuf yaalaa akka ture himeera.
Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e torban darbe koree nageenyaa hundeessuun isaa ni yaadatama.